पर्यटनमन्त्रीलाई पाँच प्रश्न ?
Milan Ghimire calendar_today २८ साउन २०७६, 12:29 pm
शुक्रबार पनि मन्त्री भट्टराईले पर्यटन व्यवसायीसँग सुझाव माग गरे । चुनौती के के छन्, समाधानका उपाय के हुन सक्छन् रु भ्रमण वर्ष २०२० कसरी सफल पार्न सकिन्छ लगायतका विषयमा उनले व्यवयासीका राय लिए । मन्त्री भट्टराईसँग हामीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ, प्रस्तुत छ सम्पादित अंशः
भिजिट नेपालको सुरुवात कहाँबाट गर्नुहुन्छ ?
म यसको लागि तयार छु । भाग्ने कुरा छैन । भागेर काहीँ पनि पुगिँदैन ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले डिजिटल स्योलाईट बनाएको छ । काम लगचग सुरु हुने चरणमा छ । योबाट पनि यकिन तथ्यांक आउँछ । अर्को भनेको नेपाल आउने एयरलाईन्ससँगको सहकार्यमा टिकटमै भ्रमण अंकित लोगो वा छाप प्रयोग गर्ने योजना छ । यो म डिटेलमा पछि भनौला ।
२० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर संख्या तोकिएको छ । विदेशमा संख्या सँगै आर्थिक कारोबार मुद्रा आम्दानीको लक्ष्य पनि राखिन्छ । हाम्रोमा चाँही आम्दानीको लक्ष्य नराखिएको हो रु
नराखिएको भन्ने पक्कै होईन । सन् २०१८ मा पर्यटक आगमनको तथ्यांक हेर्दा हाम्रोमा ३ मिलियन डलरभन्दा धेरै आम्दनी भएको तथ्यांक छ । अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । यसलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । यो नै लक्ष्य हो, आम्दानीको लक्ष्य राखिएन भन्ने हैन ।
भ्रमण वर्षकै लागि १०० गन्तव्य छानिए । ५०÷५० लाख पैसा गयो । सुधार भए नभएको बारे कत्तिको अपडेट हुनुहुन्छ ?
फाट्ट फुट्ट नेपाल बन्द पनि हुन थालेको छ आजकाल । यसले पनि असर गर्ला । कम्तीमा १ वर्ष बन्द नहुने वाताकरण मिलाउन मन्त्रालयले केही योजना बनाउने तयारी गरेको छ कि ?
एक वर्षमात्रै होईन, बन्द हुनै हुँदैन । अब हाम्रो बाटो भनेको देशलाई देशलाई आत्मनिर्भर र आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनु छ । त्यसको लागि उपर्युक्त माध्यम पर्यटन हो । हामीकहाँ धेरै सम्भावना छ ।
म बन्द गर्ने, आन्दोलन गर्ने काम नगर्न साथीहरुलाई आग्रह गर्छु । यसले मूलुकको समृद्धिको यात्रा विथोलिन्छ । अब हातेमालो गरौँ ।